Vaovao - Karazan-damba landy isan-karazany
Raha tia lamba mihaja ianao, dia hifanaraka amin'ny landy, kofehy voajanahary matanjaka izay miteny lafo sy kilasy. Nandritra ny taona maro, fitaovana vita amin'ny landy no ampiasain'ny mpanankarena hanehoana ny saranga.
Misy karazana fitaovana landy isan-karazany mety amin'ny fampiasana isan-karazany. Ny sasany amin'izany dia misy charmeuse landy, izay fantatra koa amin'ny satin landy. Ity lamba ity dia tsara indrindra amin'ny fanjairana lamba toy ny akanjo mikoriana, blouse malalaka, atin'akanjo, fehiloha ary kimono miaraka amina charmeuse landy. Maivana sy malefaka izy io ary manana sisiny havanana mamiratra.
Karazana fitaovana landy hafa azo ampiasaina dia chiffon; maivana ary semi-mangarahara ity landy ity. Izy io dia mety tsara ho an'ny kofehy, scarves ary blouse ary manome endrika kanto sy mitsingevana.
Manaraka izany dia i Georgette; ity lamba ity dia ampiasaina amin'ny akanjo ampakarina sy akanjo hariva; azo nozairina amina endrika akanjo isan-karazany toy ny akanjo mirehitra, tsipika na fonosana. Ary farany, ny velarana dia lamba landy iray hafa izay ampiasaina amin'ny famokarana palitao, zipo ary akanjo. Maivana ihany koa ary manana drape tsara tarehy.
Ny karazan-damba tsara indrindra azo safidiana rehefa mamokatra saron-ondana landydia charmeuse vita amin'ny landy mulberry 100%. Malemy sy marevaka ity lamba ity; manana ny fananana izay manome tony sy torimaso tsara.
Ho an'ny pajama landy dia tokony hisafidy satin Crepe ianao, izay mifoka rivotra sy milamina kokoa. Ny momme mahazatra dia matetika 12mm, 16mm, 19mm, ary 22mm. Ka 30mm no safidy mety indrindra.
Ho an'ny sarontava amin'ny landy, ny fitaovana tsara indrindra dia ny landy mulberry. Manana faritra malama izy io. Manala ny fihenjanana, mampitony ny hozatra, mamorona tontolon'ny torimaso tsara, manala ny fanelingelenana, ary manampy amin'ny fanarona ny tara-pahazavana eo amin'ny maso.